याे हाे ३९ श्रीमती, ९४ सन्तानकाे हाँसीखुसी परिवार, एक दिनमै पाक्ने गर्छ ५० किलाे चामल - NA MediaNA Mediaयाे हाे ३९ श्रीमती, ९४ सन्तानकाे हाँसीखुसी परिवार, एक दिनमै पाक्ने गर्छ ५० किलाे चामल - NA Media
याे हाे ३९ श्रीमती, ९४ सन्तानकाे हाँसीखुसी परिवार, एक दिनमै पाक्ने गर्छ ५० किलाे चामल
भारतस्थित पूर्वोत्तर राज्य मिजोरमका ७२ वर्षीय डेज जिओना । उनको परिवारका सदस्य एउटा, दुइटा, तीन वटा हैन, १ सय ८१ जनाको छ । जिओनाले ३९ श्रीमती, ९४ सन्तान, १४ बुहारी र ३३ नातिनातिनासहित जम्बो परिवारलाई पाल्छन् ।
उनको परिवार एसियाकै सबैभन्दा ठूलो भएको ‘डेली न्युज’ ले जनाएको छ । पेसाले सिकर्मी उनको बख्तबाङ गाउँमा चारतले पक्की घर छ । जसमा सयजति कोठामा आफ्ना परिवारका सबै सदस्यलाई अटाउन भ्याएका छन् ।
हाँसीखुसी र मिलीजुली बस्छन् । घरका अभिभावकले अह्राएको काम गर्छन् र बाँडीचुँडी खान्छन् । सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि यो सत्य हो । जिओना भन्छन्, ‘मेरो पहिलो विवाह १७ वर्ष उमेरमा भएको थियो ।’ जम्बो परिवारलाई मिलाएर राख्ने गरेको एक जिज्ञासामा उनले परिवारमा सेनाको जस्तै अनुशासन रहेकाले सम्भव भएको बताए । उनकी प्रथम श्रीमतीले सबैलाई काम अह्राउने गरेकी छिन् ।
जिओना थप्छन्, ‘म आफूलाई भाग्यशाली ठान्छु, मेरो परिवार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र आदर्श परिवार हो ।’ उनको परिवारबारे अर्को रोचक प्रसंग पनि अनलाइनहरूले उल्लेख गरेका छन् । त्यो हो, निर्वाचनमा सबैले एउटै उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु । नेपालमा हाल निर्वाचनको वातावरण छ ।
दलैपिच्छे परिवारका सदस्यहरू विभाजित छन् । तर, उनको परिवारमा यो फिटिक्कै छैन । यो सबैका लागि मननयोग्य कुरो भइहाल्यो । जिओना भन्छन्, ‘मेरो परिवारका सबै सदस्यले हालसम्म हालसम्म एउटै व्यक्तिलाई मत दिने गर्छन् ।’ त्यसैले निर्वाचनको बेला उनको परिवारको महत्त्व झनै बढ्ने गरेको छ । यसले एकताको सन्देश पनि दिएको छ ।
यसबारे उनी भन्छन्, ‘गाउँकी निर्धन महिलासँग विवाह गर्छु र तिनलाई चाहिने सबै कुरोको चाँजोपाँजो पनि मिलाउँछु । विशाल बैजनी कंक्रिटबाट निर्मित मेरो जिओना हबेलीमा नव आगन्तुक श्रीमतीलाई सबैले हाँसीखुसी स्वागत गर्छन् । सम्मान पनि ती सबैले बराबरै पाउँछन् । एजेन्सी
Gallery image with caption: आज जेठ २४ गते शनिबार, यस्तो छ आजको पञ्चाङ्ग र राशिफल
Gallery image with caption: विश्वका अनौठा यौनकाण्डहरु
Gallery image with caption: कसरी आफैं टालियो ओजोनको प्वाल ?
Gallery image with caption: ‘प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाऔं’
Gallery image with caption: यौनसम्बन्धी नसुनिएका १९ रोचक तथ्य !
Gallery image with caption: लकडाउनमा श्रीमती माइतीमै फसिन्, श्रीमानले गरे प्रेमिकासँग बिहे
Gallery image with caption: प्राक–क्रिडा : रोमाञ्चक यौन–जीवनका लागि
Gallery image with caption: यो हो विश्वकै खतरनाक राइफल
नेपाल एअरलाईन्सको रियाधबाट हुने चाटर्ड बिमानमा ३० किलो लागेज र ७ किलो ह्यान्ड क्यारी, यात्रुहरुले अरु के के कुरामा ध्यान दिने ?